London: Shirweynahii Hoodaale ee beelweynta sacad muuse oo sabtidii ka dhacay galbeedka magaalada London | SDWO.COM & SomalilandNews.net
London: Shirweynahii Hoodaale ee beelweynta sacad muuse oo sabtidii ka dhacay galbeedka magaalada London
Published on August 29, 2016 by sdwo · No Comments
Waxay Beel-weynta Sacad Muuse ee UK magaalada London ku qabsatay 27/08/2016 shirweyne balaadhan oo la iskaga kala yimid dhammaan magaalooyinka iyo gobollada dalka UK. Shirweynahaas oo loogu magac daray HOODAALE UK
Ujeedada shirku waxay daarnayd sidii loo dardar gelin lahaa taageerada musharaxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo M/weyne ku xigeenka A/raxmaan C/lahi Saylici iyo guud ahaanba Xisbiga Kulmiye, looguna biirin lahaa muruq, maal iyo maskax intaba, meelna looga soo wada jeedsan lahaa hawlaha u diyaargarawga doorashooyinka soo socda.
Shirku wuxu ku dhammaaday guul iyo jawi qurux badan.
Shirkaa waxa ka soo baxay go’aano waafiya oo wax ku ool ah: Waxaa halkaa lagu magacaabay gudiyada kala ah:
A. Guddiga guud ee Siyaasadda Beesha SM
B. Guddi hoosaadka dhaqaalaha
C. Guddiga hoosaadka Abaabulka iyo wacyigelinta
D. Guddiga Musdambeedka
Waxaa shirkaa qudbado dhinacyo badan taabanaya kasoo jeediyey Odayaasha, Dumar Aqoonyahan iyo wax-garad ku hadlayey magaca bulshada magaalooyinka iyo gobollada UK ee Bristol, Manchester, Birmingham, Coventry , London , Sheffield iyo Leicester.
Guddiga Siyaasadda SM UK